NGABE KUTSHANYELWA IXESHA LOKUGQIBELA KWIMIMANDLA EMISELAYO?
Umzi mveliso weDigital Signage ukhula unyaka nonyaka. Ngonyaka ka-2023 imakethi yedigital Signage isethelwe ukukhula ngo- $ 32.84 billion. Itekhnoloji yeTouch Screen licandelo elikhulayo lokutsala kwimakethi yeDigital Signage nangakumbi. Kwisiko leTekhnoloji yokuThinta isikrini eselusetyenziswa kwisicelo sokuthengisa. Nangona kunjalo itekhnoloji entsha yokusebenziseka eyiCustomer eCapacitive esetyenziswe kwii-smartphones isetyenzisiwe njengoko iindleko zokuvelisa ezichaphazelekayo sele zehlile. Kwilizwe eligcwele ii-Smartphones zeTouch Screen kunye neetafile abanye baqikelela ukuba izikrini zokuChukumisa ikamva lishishini ledigital Signage. Kule blog ndiza kuphanda ukuba ngaba kunjalo okanye akunjalo.Umzi mveliso wentengiso ungaphaya kwekota yokuthengiswa kweDigital Signage kodwa imboni ngokwayo ihamba ngexesha elinengxaki. Ukuthenga kwi-Intanethi kuphazamise ukuthengisa kunye nokubangela ingxaki kwisitrato esikhulu. Ngokhuphiswano lokuthengisa olunjalo lokusingqongileyo iivenkile kufuneka zitshintshe indlela yabo yokufumana abathengi baphume kumakhaya abo baye kwiivenkile. Izikrini zokuChukumisa ziyenye indlela abanokukwenza ngayo oku, Iikrini zokuChukumisa zinokusetyenziselwa ukunceda abathengi bafumane / benze ii-oda zeemveliso kwaye bathelekise izinto ngakumbi kubunzulu umzekelo. Ngokusebenzisa ukuboniswa okufana ne-PCAP yethu yokujonga isikrini Kiosks ziyolwandiso lwendlela abathengi ababona ngayo uphawu lwabo kwi-smartphones nakwiikhompyuter. Olu hlobo lwetekhnoloji lunokusetyenziselwa ukunika abathengi amava obuqu ngakumbi kwaye babenze bazibandakanye ngakumbi kwiimveliso zabo kunye brand. Ukwenza izinto ezintsha apho abathengisi banokwenza umahluko ngokwenyani, ngezibonisi ezizodwa ezifana nePCAP yeScreen Screen Mirerals zinokwenza amava abanokufumana abathengi ngokufika nje esitolo.
Omnye umzi-mveliso apho i-Digital Signage ivuselela icandelo labo kwiiNkonzo zokuKhawuleza zeeNkonzo (QSR). Iintengiso eziphambili ze-QSR zeemarike ezinje ngeMcDonalds, Burger King kunye ne-KFC ziqalisile ukukhupha iiBhodi zeMenyu zoDijithali kunye neenkonzo zokunxibelelana zokuzonwabisa ezingena kwiivenkile zazo. Iivenkile zokutyela zizibonile izibonelelo zale nkqubo njengoko abathengi bathambekele ekuyaleni ukutya okuthe kratya xa bengafumani xesha loxinzelelo; kukhokelela kwinzuzo engaphezulu. Abathengi abaninzi bayazithanda ezi ntlobo zokuThinta iiTouch kuba ngokubanzi akufuneki balinde ixesha elide ukuze iodolo zabo zithathwe kwaye baziva bengaxinekanga ukuba bayalele ngokukhawuleza xa bemi kwikhawuntara. Njengoko isoftware yoku-odola isiya ifikeleleka ngakumbi ndiqikelela ukuba ii-Screen Screens kungekudala ziya kuba yimigangatho kumakhonkco okutya okukhawulezayo.
Ngelixa isabelo sentengiso seTouch Screens ngaphakathi kwishishini ledigital Signage sikhula kukho izinto ezimbalwa ezizibambayo okwangoku. Umcimbi ophambili kukudalwa komxholo. Ukwenza umxholo weScreen sokuThinta akukho lula / kukhawuleze nokuba kungabikho. Sebenzisa iwebhusayithi yakho kwi-Screen Screen akuyimfuneko ukuba izise izibonelelo ozifunayo ngaphandle kokuba wenza umxholo ofanelekileyo wesisiboniso somboniso esenzelwe injongo. Ukwenza lo mxholo kungadla ixesha kwaye kubize. Iindleko zethu ezisebenzayo zokuChukumisa nge-CMS nangona kunjalo zivumela abasebenzisi ukuba benze kwaye balawule umxholo weScreenens. Idignage AI yedijithali kuqikelelwa ukuba lolunye uhlobo olukhulu kwishishini olunokutsala kugxilwe kude kuMhlaba wokuChukumisa, ngesithembiso somxholo onamandla othengiswe ngqo kumaqela athile abathengi. Izikrini zokuChukumisa ngokwazo ziqokelela uqwalaselo lweendaba ezingezizo kutshanje, ukusuka kwizityholo zokuboniswa okungathandekiyo kwimabango ezenzekelayo ngokuthatha imisebenzi.
Izikrini zokuChukumisa ZIYA kuba yinxalenye enkulu yekamva lomzi mveliso weDigital Signage, izibonelelo ezininzi zetekhnoloji esebenzisana nayo iya kuwuxhasa wonke ushishino. Njengoko indalo yesiqulatho seZikrini zokuChukumisa iphucuka kwaye ifikeleleka ngakumbi kwii-SMEs ukukhula kweZiko lokuChukumisa kuya kuba nako ukuqhubeka nenkqubela phambili enomtsalane. Andikakholelwa ke ukuba ii-Screens zoBodwa ziyikamva elizayo, zisebenza ecaleni kweSignage yeDijithali engadibaniyo nangona zinokuncoma zonke izisombululo zeempawu.